Cillada Xadiithka see lagu gartaa? | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Cillada Xadiithka see lagu gartaa?
In la ogaado xadiithka in ciladi ku jirto ma ilhaam baa?
Horta ilhaam waxaa la yidhaahdaa in Ilaahay swt qofka uu siiyo wax, waxaas oo uusan xoog iyo xeelad isagu uu leeyahay uusan ku helin.
Imaam kamid ah Culimada muxadithiinta ayaa laga yaabaa inaad weydiiso xadiith sixadiisa. Markaasuu intuu sidaa u eego xadiithka ayuu horey ka dhihi waa saxiix ama waa dhaciif.
Hadaba su’aasha taala waxaa weeye siduu ku gartay?.
Cabdurraxmaan ibnu Mahdi ayaa la weydiiyay , Waa adiga dhaha xadiith markaad aragto wuu suganyahay ama ma sugna ee xageed ka keenta hadalkaas?. Markaasuu yidhi kawaran hadaad u tagto mid dahable ah ood u geyso daraahim, deedna uu dhaho dirhamkan waa mid wanaagsan kanna ma wanaagsana, ma waxaad ku dhihi yaa kuu sheegay? Mise waad iska aamini hadalkiisa? . Markaasaa loogu jawaabay mayya waan iska aamini. Hadaba wax welba oo aad loo fiirfiriyo sifiicana loogu yeesho khibrad waa sidaas.
Hadaba Culimada noocaass ah waxaa loo yaqaanaa ” Jahaabidhah” waxaana af soomali lagu dhahaa ” Ruugcadaa”. Waa niman shaqadoodu wax kale maha aan ka ahayn inay diraasaan xadiithka matnigiisa iyo sanadkiisaba, heer ay ka yeeshaan dareen ah in hadalkani yahay mid uu yidhi Rasuulkii Ilaahay ( calayhi salaatu wassalaam) iyo in kala. Kuwa ubaahan maha inay bathi dheer galaanba.
Sidaa daraadeed su’aasha cinwaanka ee ahayd Cilada xadiithka in la garto ma ilhaam baa oo Ilaahay ayaa dadka ku ilhaamay?. Waxaan leenahay haa.
Laakiin inkastoo ay ilhaam tahay hadana dadka ardayda ah ee aan gaadhin ” Ruugcadaa” nimada, waxaa weli u furan baabka ku saabsan baadhida cilada xadiithka.
Sideen ku gartaa xadiithka ciladiisa maadama aanan ahayn mid horey ka dareemaya sida dahablaha uu horey uga garto dahabka kan saxda ah iyo kan beenta ah?.
Sidan samee: Soo uruuri duruqdiisa oodhan: Xadiithka aad isleedahay waa inaan baadho sixidiisa waa qasab inaad soo uruuriso inta waddo ee uu ku yimid.
Kadibna waa inaad waddo welba ragga werinaya aad meel kuwada qorato.
Raggaas aad wada qoratay waa inaad soo baadho mid welba turjumadiisa, Culimadu waxay ka dhaheen iwm. Nin welba oo xadiith weriyay culimadu waxay ka qoreen hadal. Xataa kan la aqoon waxay dhahaan ” Hebel ma naqaano waa majhuul”.
Kutubta Rijaasha laga qorana way badanyihiin, waxaa kamid ah : Siyaru Aclaamu Nubalaa, Tahdhiibul Kamaal, Miizaanul ictidaal, Cilalka Tirmidi, Daaraqudni, iyo Ibnu Abii Xaatim.
FG: Ciladu badanaa waxay gashaa isnaadka oo way yartahay matniga in laga helo cilad.
Wallaahu tacaa aclaa wa axkam Like this:Like Loading...
from → Cillada Xadiithka sidee lagu gartaa?, Duruus Yaryar Cilmul Xadiith
← Waa kuma Dr Cali Maxamed Saalax
App fudud oo Xadiithka lagu baadho! →